स्वास्थ्य/जीवनशैली::Best News Experience from Nepal
जानी राखौँ दालचीनीको यी ५ उपचार विधिः
बुटवल । आयुर्वेदिक, यूनानी र चाइनीज मेडिसिन बनाउन दालचीनीको प्रयोग हजारौँ वर्ष देखि भैइरहेको छ । आज पनि यसलाई कयौँ रोगहरूको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ । आयुर्वेदिक एक्सपर्टका अनुसार, दालचीनीको यी ५ उपचार विधि चर्चा गरिएको छ र साथै दालचीनीको प्रयोग कुनै पनि विधिले उपयोग गर्दा फाइदाजनक हुन्छ । १- दालचीनी पाउडरमा इलायचीलाई पिसेर मिलाउनुहोस् । यसलाई खाँदा पेटको समस्या जस्तैः कब्जियत र एसिडिटीको समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ । २- दालचीनी पाउडरलाई महको साथमा सेवन...
जानी राखौँ काँचो केरा सेवन गर्नुको फाइदाः
बुटवल । पाकेको केराको तुलनामा काँचो केराको सेवन कम मात्रामा हुने गर्छ किनभने यसको फाइदाको बारेमा कमै मानिसलाई थाहा छ । काँचो केरामा पोटाशियमको भरिपूर्ण मात्रा हुन्छ, जसले इम्यून सिस्टमलाई बलियो बनाउनुको साथै यसले शरीरलाई दिनभरि सक्रिय बनाईराख्छ । यसमा रहेको भिटामिन बि, भिटामिन सी कोशिकालाई पोषण दिने काम गर्छ । नियमित रूपले दिनहुँ एक काँचो केरा खानु निकै फाइदायुक्त मानिन्छ । वजन कम गर्न सहयोगी वजन कम गर्न कोशिश गर्नेहरूलाई...
कागती नियमित खानुहुन्छ ? थाहा पाउनुस् यसका फाइदाः
बुटवल । कागतीलाई हामी चिया देखि खाना खाजा एवं पानीमै पनि घोलेर खाने गर्दछौं । मानव स्वास्थयको लागि कागती अति नै लाभदायक अम्लिय फल हो । मुख्य रुपमा तौल घटाउनका लागि कागतीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै कागतीमा रहेको अम्लले पाचन प्रणालीलाई मजबूत पार्ने र अनावश्यक विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । यसमा भिटामिन सी उच्च मात्रामा पाइने हुँदा समग्र स्वास्थ्य लागि यो फाइदाजनक छ । कागतीको मुख्य फाइदाहरु तौल...
तपाइको कान दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ?
बुटवल । तपाई कान दुखेर हैरान हुनु भएको छ ? कि तपाईको बच्चाले सधै कान दुख्यो भनेर सताइरहेको छ । अस्पताल जाँदा र आधुनिक औषधी खाँदा खाँदै पनि सञ्चो नभएर पिडित हुनु हुन्छ भने यो जानकारी तपाइको लागि हो । तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ तपाई हाम्रो भान्सामा सधै पाइने तरकारी प्याँज कान दुखाइको अचुक औषधी हो । कान सुन्निने, चिलाउने र संक्रमण भएको अवस्थमा तपाईले ५ मिनेटमानै आराम पाउन प्याज प्रयोग...
जानी राखौँ सुत्नु अगाडि गर्न नहुने केही काम
बुटवल । पर्याप्त सुताई मानिसका लागि अपरिहार्य छ । तर सुत्नुभन्दा अगाडि गर्ने र उठिसकेपछि गर्ने कार्यमा विभिन्न तथ्य लुकेका हुन्छन् । सुत्नुअघि केही कुरामा विचार गरिएन भने अस्वस्थता र रोगको भारी बोकेर समस्यामा पर्न सकिने हुन्छ । सुत्नु अगाडि गर्न नहुने यस्ता केही काम छन् ती कामले तनाव तथा स्वास्थ्य समस्या निम्त्यान सक्छ । १. चियाकफी सामान्यतः मानिसहरु खाना खाएपछि एक कफ चिया या कफी पिउन मन पराउँछन् । तर,...
यी ७ व्यक्तिले अनार खानु राम्रो हुदैन
बुटवल । हरेक फलफुल खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । तर केहि फलफुल यस्ता रोगीहरुले नखानु राम्रो हुन्छ। अनारले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ । तर यी ७ व्यक्तिले अनार खानु राम्रो हुदैन। स्वस्थ्यमा सुधार आउनुको साटो झन् बिग्रिन सक्छ। १- तौल घटाउन चाहने व्यक्ति यदि तपाई आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने अनार नखानुहोस्। अनार खादा तौल घट्नुको साटो बढ्न थाल्छ। २- प्रेसर लो हुने व्यक्ति अनारमा पाइने एंटीऑक्सीडेंट्सका कारण प्रेसर...
आयुर्वेदिक औषधी सेवन गर्दा यी कुरामा विशेष ध्यान राख्न आवश्यक
बुटवल । आयुर्वेदिक औषधी बढी मानिस यसकारण प्रयोग गर्छन् कि यसबाट कुनै पनि किसिमको साइड इफेक्ट हुँदैन । तर यदि यसलाई सही तरिकाले सेवन नगरेमा यसको सम्पूर्ण फाइदा प्राप्त हुँदैन । आयुर्वेदका अनुसार यी औषधीको प्रयोग गर्दा केही सावधानी अपनाउन अति आवश्यक हुन्छ । यसो नगर्दा स्वास्थ्य समस्या पनि हुनसक्छ । यसकारण आयुर्वेदिक औषधी सेवन गर्दा यी कुरामा विशेष ध्यान राख्न आवश्यक हुन्छ । १. आयुर्वेदिक औषधी सेवन गर्दा खट्टो...
यी ५ कारणले पनि आवश्यक हुन्छ, क्याल्शियम
बुटवल । ओस्टियोपोरोसिस इन्टरनेशनल जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनको अनुसार, शरीरमा केवल हड्डीलाई बलियो बनाउनको लागि मात्र नभई क्याल्शियम लिनुको अन्य कयौँ फाइदा छन् । यसकारण चिकित्सकका अनुसार, यहाँ चर्चा गरिएको छ कि स्वस्थ रहनको लागी क्याल्शियमले भरिपूर्ण चीज किन आवश्यक छ । क्याल्शियमको कमीले उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य समस्या -मांशपेशीमा दुखाई महसूस हुन्छ । -स्मरण शक्तिमा कमी आउँछ । -डिप्रेशनको समस्या बढ्छ । -हात-खुट्टामा झम्झमाउँछ । -शरीर चेतनारहित हुनथाल्छ । यी ५ कारणले पनि आवश्यक हुन्छ, क्याल्शियम १- क्याल्शियमको...
काँचो बेसारको फाइदै-फाइदा
बुटवल । जाडो मौसममा काँचो बेसारको एक टुक्राको उपयोग सबैभन्दा अधिक लाभदायक हुन्छ र यो समयमा बेसारको प्रयोगले हुने फाइदालाई कयौँ गुणा बढाउन सक्छ किनकि काँचो बेसारमा बेसार पाउडरको तुलनामा अधिक गुण हुन्छ । तपाई यो जानेर आश्चर्यमा पर्न सक्नुहुन्छ कि काँचो बेसारको प्रयोगको क्रममा निस्कने रंग बेसारको पाउडरको तुलनामा अधिक गाढा र पक्का हुन्छ । यसलाई जूसमा मिलाएर, दूधमा उमालेर, चामलको परिकारमा मिलाएर, अचारको रूपमा, चट्नी बनाएर र...
बन्दा सेवन गर्दा हुने फाइदाहरु-
बुटवल । तपाई हामी सबैले बन्दाको तरकारी त खाएकै हुन्छौ । बन्दा तरकारीका अलावा सलादका रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । बन्दाको तरकारी कति पय लाई मन पर्छ भने कसैलाई मन नपर्न पनि सक्छ । यसमा कैयौं औषधीय गुण हुन्छन् । जसले हामीहरुलाई निरोगी बनाउँछ । बन्दामा रहेका केही सुक्ष्म तत्वले शरीरमा रहेका विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्छ र शरीरको पाचन प्रक्रिया, मेटाबोलिजमलाई नियमित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । बन्दा सेवन...